အိုင်ဖုန်း (သို့) အိုင်ပက်ပေါ်မှဝက်ဘ်စာမျက်နှာကိုပိတ်ဆို့နည်း။ အိုင်ဖုန်းသတင်း
Ignacio Sala | | iOS ကို, သင်ခန်းစာများနှင့်လက်စွဲစာအုပ်
အိမ်၏အသေးငယ်ဆုံးကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှလိုအပ်ချက်အရသော်လည်းကောင်း၊ သူတို့၏လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှဖယ်ထုတ်ခြင်းမပြုရန်လည်းကောင်းအချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်သည်။ \_ t ကလေးတွေကိုမိုဘိုင်းဖုန်းဒါမှမဟုတ်တက်ဘလက်တွေ ၀ ယ်ခိုင်းတယ်။ မည်သည့်အကြောင်းအရာအမျိုးအစားကိုမဆို ၀ င်ရောက်ခွင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့မူလအတိုင်းကာကွယ်လိုပါကလက်ရှိစျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာ iOS ဖြစ်သည်။
အင်တာနက်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အမြတ်အစွန်းနှစ်မျိုးလုံးရှိသောမည်သည့်အမျိုးအစားကိုမဆိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်အရွယ်ပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများမဝင်ရောက်စေလိုသောအကြောင်းအရာအချို့ကိုလည်းတွေ့ရှိနိုင်သည်။ အဓိကလမ်းကြောင်းသည် Safari မှတစ်ဆင့်ဖြစ်သည်။ , iOS configuration options အတွင်းကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုသော browser တစ်ခု ဝဘ်စာမျက်နှာများကိုပိတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးငယ်များသည်ကျွန်ုပ်၏အိုင်ဖုန်းသို့မဟုတ်အိုင်ပက်ဒ်ကိုပုံမှန်စတင်အသုံးပြုလာခဲ့လျှင်၊ သို့မဟုတ်၎င်းကိုတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ဝယ်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့လျှင်၊ ၎င်းသည်သင်နှင့်သက်ဆိုင်သောအချို့သောဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့မလည်ပတ်ကြောင်းအမြဲတမ်းသိနေလျှင်လုံးဝအေးဆေးတည်ငြိမ်လိုသည်။ လိင်၊ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ အကြမ်းဖက်မှု၊ ဂျူးဆန့်ကျင်ရေးဝါဒ၊ အကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အကြောင်းအရာမဆိုကျွန်ုပ်တို့အကောင်းဆုံးပြုလုပ်နိုင်သည် ဒီစာမျက်နှာအမျိုးအစားများကိုပိတ်ဆို့ တိုက်ရိုက်စက်ကနေ။
iOS သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကို ၀ က်ဘ်မှတစ်ဆင့်သာမကအင်တာနက်ကိုပါကန့်သတ်နိုင်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုချထားပေးသည် သူတို့ iTunes မှတစ်ဆင့်ကြည့်ရှုနိုင်သောအကြောင်းအရာအမျိုးအစားအကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် ၁၈ နှစ်ကျော်လျှို့ဝှက်ရုပ်ရှင်ကားတစ်စီး ၀ ယ်ခဲ့ပါကကျွန်ုပ်တို့ကန့်သတ်ချက်များကိုသတ်မှတ်ထားသရွေ့မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုကစားနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အသက်အရွယ်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသောစာအုပ်များသို့မဟုတ်တေးဂီတများတွင်လည်းအလားတူပင်။
1 iOS ပေါ်ရှိဝဘ်စာမျက်နှာများကိုပိတ်ဆို့ခြင်းမပြုမီစဉ်းစားရမည့်အရာများ
2 iOS ၏ကန့်သတ်ချက်များမှမည်သည့်အရာများကိုပိတ်ဆို့နိုင်သည်
3 iOS ပေါ်ရှိဝဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုကိုပိတ်ပါ
ပထမ ဦး စွာအသေးအဖွဲအင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်ရှိသည့်စက်ပစ္စည်းနံပါတ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ iPhone သို့မဟုတ် iPad အပြင်၊ သူ၌အင်တာနက်ရှိရန်ကွန်ပျူတာရှိလျှင်၎င်းစက်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သောကန့်သတ်ချက်များမရှိပါ။ အခြားစက်ပစ္စည်းများနှင့်ထပ်တူပြုခြင်း၊ အရာတ ဦး တည်းအားဖြင့်တ ဦး တည်းအပေါငျးတို့သ devices တွေကို configure ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအတင်းလိမ့်မယ်.
MacOS၊ Mac လည်ပတ်မှုစနစ်ကပေးသောမိဘထိန်းချုပ်မှုရွေးချယ်မှုများအတွင်း၊ အသက်အရွယ်ပေါ် မူတည်၍ ၎င်းတို့ရရှိနိုင်သောအကြောင်းအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့ပိတ်ဆို့နိုင်သည်ကလေးများတစ်နေ့လုံးကွန်ပျူတာကိုမဖြည့်ရအောင်တားဆီးရန်၊ တစ်ပတ်အတွင်းနှင့်စနေ၊ တနင်္ဂနွေများတွင်နာရီပေါင်းများစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။
၀ င်းဒိုး ၁၀ တွင်၊ အချိန်ကန့်သတ်ချက်များ၊ ၀ ယ်ယူမှုများနှင့်သူတို့ရယူနိုင်သောအကြောင်းအရာများအပါအဝင်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများရရှိနိုင်သော ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးအစားကိုစီမံရန်ရွေးချယ်စရာအမြောက်အမြားကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ iOS တွင်အချိန်သို့မဟုတ်အချိန်ဇယားကိုကျွန်ုပ်တို့မရရှိနိုင်ပါ အရာအားလုံးကအနာဂတ်မူကွဲများရရှိနိုင်လိမ့်မည်ဟုညွှန်ပြပုံရသည်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများသည်၎င်းစက်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
ကိရိယာနှင့်မဆက်သွယ်ဘဲအင်တာနက်ကိုတိုက်ရိုက်ပိတ်ဆို့ရန်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိသော်လည်းစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်မှုများသည်လည်ပတ်မှုစနစ်များမှကမ်းလှမ်းထားသည့်အတိုင်းမများလှပေ။ router မှတစ်ဆင့်မည်သည့်ထုတ်ကုန်များသည်အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်ရှိသည်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည် ဝင်ရောက်ချိန်ကိုသတ်မှတ်ပါ သူတို့ကအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုနဲ့သူတို့အဓိကဆက်သွယ်လို့မရတဲ့စာမျက်နှာတွေကရှိတယ်။
iOS သည်သုံးစွဲမှုအတွက်အချိန်ကာလသတ်မှတ်ခြင်း မှလွဲ၍ စက်ပစ္စည်း၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်မှုကိုမဆိုလက်တွေ့ကျကျထည့်သွင်းစဉ်းစားသောကန့်သတ်သည့်စနစ်ကိုပေးသည်။ iOS ကန့်သတ်ချက်များမှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုကန့်သတ်နိုင်သည်
iTunes Store က
iTunes စတိုးတွင်ရရှိနိုင်သည့်ရုပ်ရှင်များ၊ အစီအစဉ်များ၊ စာအုပ်များ၊ အပလီကေးရှင်းများအားကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းထဲသို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသည့်တိုင်ပိတ်ပင်ထားသည်။
iOS အတွက် Apple ကခွင့်ပြုသည့်ကန့်သတ်ချက်များ၊ ၎င်းတို့သည်ဇာတိ browser Safari ကိုသာသက်ရောက်မှုမရှိပါသို့သော်၎င်းတို့သည်စက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည့်မည်သည့် browser ကိုမဆိုအကျိုးသက်ရောက်သည်၊ ထို့ကြောင့်မိဘထိန်းချုပ်မှုရွေးစရာများကိုရှာဖွေသည့်ဘရောင်ဇာမှ browser ကိုကျွန်ုပ်တို့သွားစရာမလိုပါ၊ အကြောင်းမှာပထမနေရာမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယအကန့်သတ်ချက်များသည် system တစ်ခုလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
မသန်စွမ်း iOS ပေါ်ရှိဝဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုကိုပိတ်ထားပါ ကျနော်တို့အောက်ပါအတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်
ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့တက်သည် setting များကို အထွေထွေရွေးစရာကိုနှိပ်ပါ။
ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့နှိပ်ရမည် ကန့်သတ်မှုကိုသက်ဝင်စေဤအရာမှသော့ဖွင့်သောကုဒ်ကိုရိုက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးလိမ့်မည်။ သင်တောင်းသောကုဒ်ကိုကျွန်ုပ်တို့မေ့နိုင်မည်မဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ကိရိယာကိုကျွန်ုပ်တို့လုံးဝပြန်မသွင်းပါကကန့်သတ်ချက်များကို ထပ်မံ၍ မရနိုင်ပါ။
ပြီးတော့ငါတို့ပြောင်းရွှေ့တယ် ခွင့်ပြုထားသောအကြောင်းအရာ ကိုနှိပ်ပါ ဝက်ဘ်ဆိုက်များ။ ဤကဏ္တွင်ရွေးချယ်မှုသုံးခုရှိသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်အားလုံး၊ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအကြောင်းအရာနှင့်အချို့သော ၀ ဘ်ဆိုဒ်များကိုကန့်သတ်ပါ။
၀ ဘ်ဆိုဒ်များအားလုံးမည်သည့်ဝဘ်စာမျက်နှာကိုမဆိုဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်သတ်မှတ်ထားသော option ဖြစ်သည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူအကြောင်းအရာများကိုကန့်သတ်ပါ။ ဤအပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကန့်သတ်လိုသော ၀ က်ဘ်လိပ်စာများကိုကဏ္ within အတွင်းထည့်ရမည် ဘယ်တော့မှခွင့်မပြုပါနဲ့.
အချို့သော ၀ ဘ်ဆိုဒ်များသာ။ ဤရွေးချယ်မှုကကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အသေးအဖွဲရယူနိုင်သော ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာများကိုထပ်မံကန့်သတ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ကလေးများအခင်းအကျင်းပါ ၀ င်သောဝက်ဘ်စာမျက်နှာများကိုမူလအတိုင်းပြသပြီးမည်သည့်နေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာအသစ်များထပ်မံထည့်သွင်းနိုင်သည်သို့မဟုတ်အချို့ရရှိနိုင်မည်ကိုဖော်ပြနိုင်သည်။
အချို့သောဝဘ်စာမျက်နှာများကိုကြည့်ရှုခွင့်ကိုကန့်သတ်ရန်၊ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအကြောင်းအရာများကိုကန့်သတ်ပါ။ ဤရွေးစရာကိုရွေးချယ်သောအခါ iOS သည်အရွယ်ရောက်ပြီးသောပရိသတ်အတွက် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကို ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုအလိုလျောက်တားမြစ်လိမ့်မည်။
အကယ်၍ ဤရွေးစရာကိုဖွင့်သောအခါ iOS သည်လူကြီးများအတွက်ခွဲခြားထားသောစာမျက်နှာအချို့သို့ ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုလိုပါက၊ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုထည့်ပါ ရွေးချယ်စရာအတွင်း အမြဲခွင့်ပြုပါ.
အခြားမည်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သို့မဆိုဝင်ရောက်ခွင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကန့်သတ်လိုပါက၎င်းသည်လူကြီးများအတွက်ခွဲခြားထားခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများ၏အဖြစ်မှန်နှင့်ပတ်သက်သောအမြင်များကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုပြသသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏နားလည်မှုအရ၊ သူတို့၏အသက်အရွယ်အတွက်၎င်းကိုထည့်သွင်းနိုင်သည် ကိုနှိပ်ပါ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုထည့်ပါ ရွေးချယ်စရာအတွင်း ဘယ်တော့မှခွင့်မပြုပါနဲ့.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iPhone ကို » သင်ခန်းစာများနှင့်လက်စွဲစာအုပ် » ဝဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုပိတ်ဆို့နည်း